विज्ञान र प्रविधि कुलमान बन्ने कि 'कुल म्यान' ?
Nepal Online Patrika| Kathmandu: अप्ठ्यारो, असहजता, अभाव, अन्यौलता आदि हुनु समस्या होइन । समस्या तब हो जब मानिससँग कुनै पनि परिस्थितिको लागि विकल्प हुँदैन । विकल्प नहुनुमा समस्या हुन्छ । एउटै कुरा दोहोरिरहनुमा समस्या हुन्छ । र दोहोराइरहन बाध्य हुनुमा समस्या हुन्छ । अर्थात् बाध्यतामा मूल समस्या हुन्छ ।
कुलमान घिसिङलाई सरकारले विद्युत प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा दोहोर्‍याएन भने आउने दिनमा लोडसेडिङको मार खप्नु पर्नेछ भन्ने डरले अहिले धेरैको मनमा ढ्यांग्रो ठोकिसक्यो । कुलमान नदोहोरिनु भनेको मुकेस काफ्ले दोहोरिनु हो भन्ने डर सामाजिक सञ्जालको भित्तामा स्पष्ट देखिँदा एउटो कुरो के सोच्न बाध्य भइयो भने कुलमानभन्दा मुकेस कैयौं गुणा शक्तिशाली रहेछन् ? कि सारा नेपाली उनको नामबाट काँपी रहेछन् । ‘शोले’ भन्ने हिन्दी फिल्ममा गब्बरको नामैबाट दूर दूरका मान्छे काँपेजस्तै । किन यति धेरै डर छ नेपाली जनतामा ? यो देशको सार्वभौमसत्ताको मालिक, संविधानका निर्माता नेपाली जनता कुलमान जालान् र मुकेस आउलान् कि भनेर डराउनु पर्ने ? कस्तो कमजोर र दयालाग्दो यथार्थ हो यो ?
म कुलमानले विद्युत प्राधीकरणमा गरेका कामको प्रशंसक हुँ । उनले हामीले भोगिरहेको अन्धकारलाई हटाउने काम गरे । तर अर्को पक्षबाट हेर्दा कुलमान दोहोरिनु भनेको फेरि पनि हामी प्रणाली होइन, व्यक्तिकै शरणमा परेको हुनजान्छ ।एकजना व्यक्तिको क्षमता र इमान्दारीबाट समाजले र देशलाई फाइदा हुन्छ । कुलमानको लोकप्रियताबाट पनि यो कुरा देखिन्छ । तर अर्को यथार्थ के पनि हो भने व्यक्ति जतिसुकै सक्षम भए पनि एउटा ठाउँमा सँधैभरी एकैजना व्यक्ति रहन असम्भव हुन्छ । चाहे त्यो विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कुर्सी होस् वा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी । हामीले त हाम्रो प्रणाली र काम गर्ने सिस्टमलाई नै यति बलियो र चुस्त बनाउने तर्फ पहल गर्नुपर्‍यो ताकि हामी कुलमान आउँदा खुशी हुनेमात्र होइन कि भोलि अर्को कुनै व्यक्ति आउँदा पनि डराउनु नपरोस् । हामीले व्यवस्था र व्यवहारलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास गरौं, ताकि कसैले बदमासी गर्न नसकोस् । गरेको खण्डमा उ तुरुन्त कारबाहीको भागिदार होस् ।
कुलमानले विद्युत प्राधिकरणमा राम्रो काम गरे । तर व्यक्तिकै सफलतामा वा एकदुईको प्रतीभा नै सारा समाजको आशा टिक्ने हो भने अरु कति क्षेत्रमा कुलमान छन् ? त्यहाँ पनि त्यस्तै क्षमता र इमानदारीका मानिस किन भएनन् । सम्पूर्ण समाज सफल हुने हो भने सबै ठाउँमा सक्षम मानिस पुग्नुपर्ने होइन ? सक्षम मानिसलाई काम गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउने संयन्त्र देशले बनाउनु पर्ने होइन ? राजनीतिले बनाउनु पर्ने होइन ? त्यो नहुँदा हामी एकदुईजना झुक्किएर भेटिने मानिसलाईनिर्विकल्प बनाएर बस्न बाध्य छौं । मुकेसलगायत को डरले कुलमान- कुलमान भनिरहँदा तेस्रो सम्भावनाको ढोका बन्द पनि भइरहेको हुनसक्छ । कुलमानले एउटा मानक बनाइसकेको स्थितिमा अब आउने जोकोहीले पनि त्यसलाई प्रतिस्पर्धा गर्न अझ नयाँ दृष्टिकोणले केही विशेष उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने चुनौती हुन्छ । तर, यदि उसले फेरि मुकेश काफ्लेको समयको जस्तो लोडसेडिङ तालिका दिन थाल्यो भने उसलाई हटाउन सक्छौं भन्ने चुनौती समाजले गर्ने सक्नुपर्ने बनाउन आवश्यक छैन र ?
उर्जाशील मान्छेहरु आफैंमा कुलमान हुन् तर ती सुतेर बस्नेहरु चाहिँ कुलमान हैनन् उनीहरू ‘कुल म्यान’ हुन् । ‘कुल म्यान’को अर्थ चिसो मान्छे । भनिन्छ मानिस मरेपछि वा उसको शरीरमा कुनै उर्जा नभएपछि चिसो हुन्छ । जिउँदा मान्छेहरू ताता हुन्छन्, उनीहरूको उर्जा हुन्छ शरीर र मस्तिष्कमा । अब निर्णय लिने बेला आएको छ हामी कुलमान बन्ने कि ‘कुल म्यान’ ?